Sunday April 23, 2017 - 12:21:18 in Wararka by Super Admin
Wareegto Boqortooyo oo kasoo baxday Salmaan Bin C/Caziiz ayaa xilal cusub loogu magacaabay mas’uuliyiin iyadoona shaqada laga Eryay safiirro iyo saraakiil ciidan.
Boqor Salmaan ayaa laba kamid ah wiilashiisa umagacaabay xilal sarsare isagoona shaqada ka eryay taliyayaasha sirdoonka iyo ciidanka lugta dowladda Aala Sacuud.
Safiirka cusub ee Sacuudiga u fadhiya Mareykanka waxaa loo magacaabay Khaalid Bin Salmaan oo ah wiilka 2-aad ee Boqorka waxaana xilkaasi horay u haayay Cabdalla Bin Feysal Bin Turki oo hadda shaqada laga eryay, Wiilka 3-aad ee Boqorka ninka lagu magacaabo C/Caziiz Bin Salmaan ayaa loo magacaabay wasiiru dowladaha wasaaradda Tamarta sacuudiga oo kamid ah wasaaradaha ugu muhiimsan ee maamulka.
Sedaxda wiil ee Boqorka Sacuudiga ayaa hadda haayay xilal sarsare taasi oo ka dhigan in Boqor Salmaan uu ciyaarayo siyaasadda kaligii talisnimada arrinkaas oo ay caan ku yihiin hoggaamiyaasha carbeed ee dawaaqiidda ah sida Mucamar Alqadaafi Hoggaamiyihii Liibiya oo wiilashiisa xilal ku tixay iyo Xusni Mubaarak Hoggaamiyihii Masar oo isna talada udhiibtay wiilashiisa.
Khaalid Bin Salmaan safiirka cusub ee Sacuudiga u fadhiya Mareykanka ayaa ah shakhsi gacmihiisa dhiig ka qoyanyahay kadib markii uu ka qeyb galay duullaanka dhanka cirka ah ee Mareykanku ay ku qaadeen wadamada Ciraaq iyo Suuriya.
Ina Salmaan ayaa ah duuliye xirfad leh oo kaxayn jiray diyaaradaha dagaalka F16 ee dowladda Sacuudigu ay ku caawisay isbahaysiga Mareykanka ee xasuuqa ka wada wadamada Ciraaq iyo Suuriya.
Khaalid Bin Salmaan ayaa dhowr sawir iskasoo qaaday isagoo diyaarad dagaal dul saaran xilligaasi oo uu isku diyaarinayay duqeymo uu ka fuliyo magaalooyin katirsan wadanka Suuriya waxaana la rumeysanyahay in boqolaal qof muslimiin Rayid ah uu gacantiisa ku dilay.
Wargeyska Alwatan ee xukuumadda taageera ayaa warbixin uu qoray ku yiri "khabiirka dhanka duulista diyaaradaha dagaalka oo Argagaxiso badan ku laayay Ciraaq iyo Suuriya ahna wiil dhalinyara ah Khaalid Bin Salmaan ayaa loo magacaabay safiirka cusub ee Sacuudiga u fadhiya mareykanka waana jago u dhiganta wasiir”!.
Sidoo kale saraakiil ciidan ayaa xilalkii ay hayeen laga eryay waxaana kamid madaxii sirdoonka iyo Afhayeenkii isbahaysiga Duufaanta go’aanka Axmed Alcaseyri.